Wikileaks miresaka Madagasikara I | Hevitra MPANOHARIANA |
Wikileaks miresaka Madagasikara I
2011-09-23 @ 21:58 in Politika
Fantatsika rehetra fa maromaro ihany ny antonta-taratasin'ny diplaomasia amerikana no nisy namoaka ho fanta-bahoaka. Mazava loatra fa mba misy miresaka an'i Madagasikara ihany koa amin'ireny. Na dia efa fotoana lasa aza ny zavatra ambarany dia mety ilaina ihany ny mahafantatra ireny rehefa mivoaka. Sa bedinareo aho? Raha mazoto aho dia mety hisy tohiny fa rehefa tsy mazoto na tsy manam-potoana na bedinareo moa dia atao akory e!
Resadresaka nifanaovana tamin'ny Masoivoho Frantsay Ao Mozambika nandritra ny nampalaza ny fifanarahan'i Maputo I sy II.
Fantatsika fa aminy teny anglisy ny lahatsoratra fototra fa ezahina ihany ny handika azy ho teny malagasy araka ny fahazoako azy.
Telegrama nivoaka tany Maputo, Mozambika.
Andro 27 Aogositra 2009
Famitinana: Resaka momba an'i Madagasikara tamin'ny 18 aogositra 2009 anelanelan'ny Maputo I sy Maputo II hisian'ny fandriampahalemana teto an-tanindrazana. Notsorin'ny Masoivoho Frantsay Christian Daziano fa tsy mino loatra ny hisian'ny filaminana eto Madagasikara avy amin'ny Maputo II ny tenany. Ny tena vaindrohan-draharahan'ny fitondrana frantsay dia ny hampitombina tsara ny faritra Atsimo andrefan'ny Oseana Indiana misy an'i Mayotte sy Reunion ary betsaka ihany ny Frantsay monina eto Madagasikara.
3.Ny frantsay no hiantoka ny fitaterana an-dRatsiraka sy ny delegasionany mandroso sy miverina any amin'io firenena io mandritra ny fihaonana.
4.Chissano no nikiry mba ho ny mpitarika efatra sy ny mpanelanelana iraisam-pirenena ihany no hifampiresaka. Ny delegasiona ambiny kosa dia hijanona eny an-dalantsara. Ankasitrahan'ny Masoivoho Frantsay ny nataon'i Chissano hampifanaraka ny rehetra tsy hilaza na inona na inona amin'ny mpanao gazety, ary lazainy fa "mety" ny fomban'i Chissano ao anatin'ny fanelanelanana mampiteraka bebe kokoa ny fifampiresahana.
5.Nasongadin'ny Masoivoho ny mahazavadehibe ny "fanafoanana ny sazin-dRatsiraka" tsy nanaiky ny hidinika raha tsy esorina [foanana] avokoa ny fiampangana sy ny fanamelohana azy. Nitady manampahaizana manokana momba ny lalàna mihitsy ny Vondrona Afrikana hiezaka ny hanome amnisitia ho an-dRatsiraka nefa tsy ilazana ilay voambolana.
6.Naverin'ny Masoivoho frantsay ihany koa ny fanirian-dRavalomanana hiverina eto Madagasikara miaraka amin'ny tafiky ny SADC saingy nankasitrahan'i Daziano ny fahaizan'i Chissano naharesy lahatra fa tsy mety ny hiverenany any fa mety hampisy ady an-trano.
7.Nanaiky ny tsy hiverina eto an-toerana Ravalomanana mandra-pisian'ny filaminana tsara. iza no manapa-kevitra fa efa milamina ny firenena? Nolazainy fa tsy voafaritra tsara ny momba an'io. Izy no miteny fa Rajoelina no iray mahatapa-kevitra momba izany. Ny mpanelanelana iraisam-pirenena kosa mihevitra fa ry zareo no manapa-kevitra amin'izay fotoana iverenan-dRavalomanana. Nasongadin'ilay Ambasadera fa raha te-hofidiana Ravalomanana dia tsy maintsy mipetraka 12 volana mialoha ny fifidianana ahafahany mifaninana, izay heveriny fa sarotra ny hiverenan'ny filaminana ao anatin'izany fotoana izany raha mikasa ny hiverina eto Ravalomanana.
8.Nitantara ny hisian'ny fifanarahana eo amin'ny efatonta ny Ambasadera mba tsy hisy hirotsaka hofidiana ireo olona alamina ireo saingy niara-nitsipaka izany avokoa izy efa-tonta, io no anisan'ny vitsy ifanarahan-dry zareo nandritra ny fifampidinihana ka na dia nikiry ny hametraka izany aza ny mpanelanelana dia tsy nahovoka hany ka najanona ny tamin'iny.
9.Samy mihevitra Ravalomanana sy Rajoelina fa izy no mahavita kokoa mitondra ny firenena.
10.Nampidirin'i Daziano ny resaka foko ary noheveriny ho "Merina" Ratsiraka. I Zafy izay Tanindrana no heveriny ho mety indrindra mitarika ny fanitsiana ny Lalampanorenana satria io no hiaro ny zon'ny Tanindrana.
11. Matahotra ny idiran'ny tafika anatin'ny fifampiresahana i Daziano fandrao iny no vao maika mampihenjana ny raharaha...Heverin'ny Frantsay fa mitady hifanakaky loatra amin'Iran ny komoriana izay firenena tsy mitombina loatra nefa ny fiarovana ny Frantsay monina aty amin'ny fari-dranomasina Indiana no tena fenitry ny fitondrana frantsay.
12. Ny hahatsara indray ny toekarena no vaindohandraharahan'ny politika frantsay ka rehefa manapa-kevitra ny hanaisotra ny sazy amin'ny fitondrana Malagasy ny Vondrona Afrikana dia handray andraikitra ka hiverina hanampy indray.
13. Mitaraina amin'ny tsy fananan'ny mpanara-maso efitra manokana mandritra ny fifampiresahana i Daziano saingy efa nahazo iraka hanaraka akaiky ny fizotran'ny fifanarahana noho ny antony ara-paritra [COI].
Hevitry ny mpamaham-bolongana
Fomba fitateran'ny mpanome vaovao ny masoivoho amerikana no tateriny ka araka ny fomba fandiniko amin'izay voasoratra kosa no amoahako ny hevitra manaraka etoana, marihina fa araka ny laharana eo ambony ihany ny laharan'ny hevitro eto ambany:
7. Hevitra Frantsay ilay manisika fa Rajoelina no manapa-kevitra hamerina na tsia an-dRavalomanana eto an-tanindrazana izay heverina fa tsy hieritreritra ny hamerina azy velively.
8. Izaho dia anisan'ny nino hatrmin'nyvoalohany fa misy olona kendren'ny Frantsay ho lany eo ka tsy misy amin'izy efa-tonta ireo ny olona tiany ho lany. Faly ery ny mpanohana an'i Pierrot Rajaonarivelo ny mamerimberina io hevitra tsy tokony irotsahan'ny efatonta io, izany hoe ny tena marina dia ny tsy irotsahan-dRajoelina sy Ravalomanana izay ahiana handresy azy amin'ny fifidianana.
9. Mahavariana ahy fa ny olona heverina ho tsy nandia fianarana ambony no manana hambom-po kokoa hitondra fa ilay nandia fianarana kosa [rafi-pampianarana frantsay indrindra indrindra] tsy tena mahasahy loatra manana izay fisaina "mahaleotena" izay. Anjaran'ny tsirairay no mieritreritra hoe nahoana isika no miazakazaka mampiditra ny zanatsika anaty rafi-pampianarana mahatonga ny zanatsika hiasa ho an'olona fa tsy "mahatsangy no ary" loatra hany ka rehefa tsy misy ny asa atolotra dia karazany mitomotoe-poana ilay olona?
10. Hita eto fa tena anaty lalao frantsay mihitsy ilay resaka foko na dia tsy misy izany loatra intsony aza any Frantsa araka ny fomba fihevitro. Io foko io no nolalaovina nandritra ny taonjato maro ary ny mampifandrafy ny merina amin'ny tsy merina izay voafoaka ho tanindrana no angadiny.
11. Ezahin'ny Frantsay hatrany ny tsy idiran'ny tafika anaty fifanarahana, na dia efa nanoratra aza ny tena tamin'izany fotoana izany fa ilaina dia ilaina io. Anaty paika ireny mba hampaharitra ny itoeran'ny sasany eo amin'ny fitondrana. Hitantsika ankehitriny fa karazany mandidy fotsiny no ataon'ny tafika hoe mahazo miditra na tsia i ranona.
12. Efa hatramin'izany fotoana izany no tsy mahandry ny hanampy ny FAT ny Frantsay saingy tsy afa-manoatra loatra noho ny sazy mipetraka. Fanampiana amin'ny alalan'ny vokovoko mena frantsay noho izany no tena nataony betsaka hanampiana ny teny ambany tanàna.
13. Miaro ny tombotsoa Frantsay ny Frantsay ka rariny ho azy izany. Saingy indraindray manindry ny hafa firenena indrindra fa ny nozanahiny teo aloha tsy hivoatra izany.
Hevitra sendra mandalo eo am-pamakiana ihany ireo fa ataoko fa manan-kevitra daholo isika rehetra ary afaka mandray anjara daholo.